आज शेयर बजार झिनो अंकले बढयो — onlinedabali.com
काठमाडौं । आज शेयर बजार झिनो अङ्कले बढेको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ०.८४ बिन्दुले बढेर १ हजार ११३.०७ बिन्दुमा पुगेको छ ।
ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ०.२७ बिन्दुले बढेर २३६. ६० बिन्दुमा पुगेको हो । स्टकका अनुसार आज कूल १५५ कम्पनीको ४ लाख ७५ हजार ७६६ कित्ता शेयर १६ करोड ४४ लाख ७८ हजार ६८८ मूल्यमा खरीद बिक्री भएको छ ।
कारोवार भएका १० उपसमूहमध्ये ३ उपसमूहको शेयर घटेका छ भने ७ उपसमूहको शेयर बढेको छ । जलविद्युत १.०७, उत्पादन १२.८ र लघुवित्त २.५८ बिन्दुले घटेका छन् ।
यस्तै बैंकिङ १.३२, व्यापार २.७, विकास बैंक ०.०२, वित्त ०.७८, निर्जीवन बीमा १०.०४, अन्य १.३१ र जीवन बीमा १.७८ बिन्दुले बढेको छ ।
झिनो अङ्कले बढेको बजारमा चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शेयरधनीले आज पनि ९. ८७ प्रतिशतले कमाएका छन् ।
गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स २.८५, बोमी माइक्रोफाइनान्सका शेयरधनीले २.८४ प्रतिशतले कमाएका छन् । हिमालयन डिस्ट्रिलरीका शेयरधनीले ३.९०, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक ३.४९, सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शेयरधनीले २.५२ प्रतिशतले गुमाएका छन् ।
कारोवार रकमका आधारमा चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मात्रै २ करोड ५० लाख ६८ हजार १९१, नबिल बैंकको १ करोड ३९ लाख ४३ हजार, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ८६ लाख ९८ हजार ६२० बराबरको कारोवार भएको स्टकले जनाएको छ ।